FAQ - Asongadino
1. Inona ny EAS?
Electronic Article Surveillance dia rafitra iray miaro ny varotra amin'ny halatra. Ny rafitra EAS dia misy singa telo:
1) Label sy sensor-elektronika mafy izay mifamatotra amin'ny varotra amin'ny tsimatra na lanyard;
2) Deactivators sy detachers-ampiasaina amin'ny fotoana amidy hamonoana amin'ny laoniny ny marika elektronika sy hamongorana ireo marika mafy azo ampiasaina rehefa novidiana ny entana;
3) Ireo mpitsangatsangana mamorona faritra fanaraha-maso amin'ny fivoahana na eo amin'ny làlan'ny fizahana.
Ny fizotran'ny EAS dia manomboka amin'ny fametahana marika na marika sarotra amin'ny varotra. Rehefa novidiana ny entana iray dia novonoina ny marika na nesorina ny mari-pamantarana mafy. Na izany aza, raha entina aorian'ny mpitsikilo ny varotra misy marika mavitrika na marika mafy, dia hisy fanairana.
Rafitra EAS maherin'ny 800,000 no napetraka manerantany, amin'ny tsenan'ny mpivarotra indrindra. Anisan'izany ny fitafiana akanjo, zava-mahadomelina, fihenam-bidy, trano foibe, tsenambarotra, Sakafo, fialamboly ary fivarotana manokana.
2. Ahoana ny fiasan'ny EAS Systems?
Ny toetoetran'ny teknolojia dia mamaritra ny haben'ny fivoahana / fidirana fidirana. Misy ny rafitra izay manarona hatrany amin'ny lalantsara ety ka hatrany amin'ny fivarotana fivarotana lehibe. Toy izany koa, ny karazana teknolojia dia misy fiatraikany amin'ny fahamoran'ny fiarovana (fanakanana na fanakanana ny signal), ny fahitana sy ny haben'ny tag, ny tahan'ny fanairana diso, ny isan-jaton'ny tahan'ny fikarohana (tahan'ny fakana), ary ny vidiny. ny marika EAS manokana ary ny teknolojia EAS misy vokariny dia mamaritra ny refy fahita matetika ampiasaina hamoronana ny faritra fanaraha-maso. Ny rafitry ny EAS dia manomboka amin'ny ambany indrindra amin'ny alalàn'ny radio matetika. Toy izany koa, ireo zana-kazo samihafa ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ireo endri-javatra izay misy fiatraikany amin'ny asa.
3. Ahoana ny fomba fiasan'ny haitao-Magnetika?
Ny rafitra EAS acousto-magnetika dia mampiasa transmitter hamoronana faritra fanaraha-maso izay ahitàna ny marika sy ny marika. Ny mpandefa dia mandefa fambara matetika amin'ny radio matetika 58 kHz (tsingerina an'arivony isan-tsegondra), fa ny matetika dia alefa am-polony. Ny signal transmit dia manome tanjaka ny tag amin'ny faritra fanaraha-maso. Rehefa tapitra ny famonoana signal signal, dia mamaly ny tag, mamoaka fambara matetika matetika toy ny fork for tuning.
Ny mari-pamantarana famantarana dia sahala amin'ny refesina mitovy amin'ny fantsom-pandefasana.Raha tsy eo anelanelan'ny pulses ny mpandefa dia mahita ny famantarana famantarana ny mpandray. Ny mikrokomputer dia manamarina ireo famantarana famantarana hitan'ny mpandray mba hahazoana antoka fa eo amin'ny refy havanana izy, mitranga amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny mpampita, amin'ny ambaratonga mety ary amin'ny tahan'ny famerimberenana. Raha feno ny mason-tsivana dia misy fanairana.
4. Ahoana no fiasan'ny teknolojia elektrômanetika?
Ny rafitry ny electromagnetic EAS dia mamorona saha elektromagnetika ambany matetika (matetika ny fampiasa matetika eo anelanelan'ny 70 Hz sy 1 kHz) eo anelanelan'ny mpandeha an-tongotra roa eo amin'ny sisin'ny fivoahana na ny fisafoana. Ny saha dia miovaova hatrany amin'ny tanjaka sy polarity, mamerina tsingerina iray miabo amin'ny tsara ka hatramin'ny miverina miabo hatrany. Isaky ny tsingerin'ny tapany dia miova ny polarity ny sahan'andriamby eo anelanelan'ny mpandeha an-tongotra.
Ho setrin'ny sahan'andriamby miova noforonin'ny mpampita, ny "médiant" an-tsaha magnetika an'ny "tag" tampoka satria ny tanjaky ny saha dia miova amin'ny lasa teboka manokana, na tsara na ratsy, isaky ny tapaky ny tsingerin'ny fandefasana. Ity fiovana tampoka eo amin'ny toetoetran'ny magnetika ity dia miteraka famantarana vetivety izay manankarena amin'ny harmonika (maro an'isa) amin'ny hatetika fototra. Amin'ny fampiasana teknika fanodinana signal elektronika, ny rafitra dia mamaritra fa ny harmonika dia eo amin'ny refy sy ny haavon'ny mety, ary izany dia mitranga amin'ny fotoana mety mifandraika amin'ny signal transmitter. Raha feno ny mason-tsivana dia misy fanairana.
5. Ahoana ny fiasan'ny Swept-RF?
Toy ny teknolojia EAS hafa, ny swept-rf dia mampiasa transmitter hamoronana faritra fanaraha-maso izay ahitàna ny marika sy ny marika. Ny mpandefa dia mandefa famantarana iray izay miovaova eo anelanelan'ny 7.4 sy 8.8 MHz (tsingerina an-tapitrisany isan-tsegondra), ka izany no iantsoana azy hoe voafafa; mamoaka fatra matetika izy io.
Ny signal transmitter dia manome hery ny marika na ny labo-swept, izay voaforon'ny faritra misy capacitor sy inductor na coil, izay samy mitahiry angovo elektrika. Rehefa mifandray miaraka amina tadivavarana, ireo singa dia afaka mamindra angovo miverina sy miverina na "mamoaka feo". Ny fatra matetika anaovan'ny feonkira dia fehezin'ny fampifanarahana ny fahaizan'ny fitehirizana ny coil sy ny capacitor. Ny tag dia mamaly amin'ny alàlan'ny famoahana famantarana iray izay tsikaritry ny mpandray. Ankoatry ny famantarana kely famantarana, ny mpandray dia mamaly ihany koa ny signal transmitter lehibe kokoa. Amin'ny alàlan'ny fitiliana ny elanelam-potoana misy eo amin'ireo famantarana roa ireo, sy ny fananana hafa amin'ny famantarana famantarana, ny mpandray dia manaiky ny fisian'ny tag ary mamoaka fanairana.
Raha mila fanazavana fanampiny sy fanontaniana hafa dia mifandraisa aminay ireo olona teknika.
Teknolojia Dept: + 86-21-52360266 Ext: 8020
Mpitantana: Johnson Gao